Known Problems & Fixes for October 2018 Windows 10 Updates | WebSetNet
Home/System Admin/Windows/Famahana Olana sy Famahana Olana ho an'ny 2018 10 XnumX vaovao amin'ny oktobra
Famahana Olana sy Famahana Olana ho an'ny 2018 10 XnumX vaovao amin'ny oktobra
AaronStuart Oct 16, 2018
0 359 Novaina ny 4 minitra
Efa ho roa herinandro lasa izay no namoahan'i Microsoft ny fanavaozana ny Windows 10 ho an'ny ampahany tamin'ny 2018 Patch Tuesday ny volana oktobra ary efa ho roa herinandro lasa izay. Ireo fanavaozam-baovao ireo dia mety ho ny Patch tamin'ny ratsy indrindra tamin'ny Tuesday tamin'ny Microsoft niaraka tamin'ny bug maro izay tsy nahatonga ny Windows 10 PCs tsy azo ampiasaina, fa ho an'ny sasany kosa dia ny fahaverezan'ny rakitra manokana.
Nanjary sarotra loatra ny nananan'i Microsoft afaho ny Windows 10 Oktobra 2018 Update mba hametrahana fotoana voafaritra tsara hamaritana ny zava-manahirana ny olana, hamaha azy ireo, ary hizaha ny fananganana vaovao miaraka amin'ny Windows Insiders.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery ireo bugs ratsy indrindra mifandraika amin'ireo fanavaozam-baovao ireo isika ary ireo vahaolana azo alamina hamahana azy ireo.
Ny October 2018 Update dia nanafoana ny rakitra sasany an'ny mpampiasa
Farany dia ny bug dia tena ratsy indrindra tao amin'ny Windows 10 October 2018 Update izay nahatonga ny fampiasan'ny mpampiasa nesorina nandritra ny dingana vaovao. Ho an'ireny mpampiasa ireny, ny hany fomba ahafahan'izy ireo mahazo ny angon-drakitra dia avy amin'ny alàlan'ny backup, ny alim-bony kopia, amin'ny alalan'ny famerenana ny rafitra, na amin'ny rindrambaiko famerenana rakitra.
Izany dia nahatonga an'i Microsoft nanoro-kevitra fa ny solosaina voakasika dia tsy ampiasaina mba hahatonga ny rindrambaiko famerenana rakitra dia hanana safidy tsaratsara kokoa amin'ny famerenana rakitra.
Herinandro taty aoriana, nanambara i Microsoft fa nanapa-kevitra izy ireo fa ny famafana ny rakitra dia mifandray amin'ny "Known Folder Redirection" nalefa tao amin'ny solosaina mpampiasa. Ny fanazavan'izy ireo dia ambany.
"Talohan'ny namoahana indray ny famoahana ny 2018 tamin'ny Oktobra, ny famotopotorana nataonay dia namaritra fa maro ireo mpampiasa no namoy ny antontan-taratasy nandritra ny 2018 Update tamin'ny Oktobra," hoy ny fanambarana Fanambarana Microsoft. "Nitranga izany raha efa navotsotra teo aloha ny Fichier Redirection (KFR) efa fantatra, fa ny tahiry dia mijanona ao amin'ny lahatahiry" old "lahatahiry ary voadidy mankany amin'ny toerana vaovao, alefa. Ny KFR dia dingan'ny famerenana mamadika ny lahatahiry fanta-daza misy Windows, anisan'izany ny Desktop, Documents, Pictures, Screenshots, Videos, Camera Roll, sns., Avy amin'ny toerana fandefasana ny habaka, c: userusername, mankany amin'ny toerana vaovao. Ao amin'ny valin'ny fanandramana taloha avy amin'ny Windows 10 April 2018 Update, ny mpisera amin'ny KFR dia nitatitra an-tsarimihetsika mahazatra, izay tsy dia misy dikany eo amin'ny fitaovana misy azy ", hoy ny fanazavan'i John Cable, Talen'ny Fitantanana Programa, Windows Servicing and Delivery, Microsoft. "Mifototra amin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpisera, dia nampiditra ny code izahay tamin'ny Oct 2018 Update mba hanesorana ireo lahatahiry fantatra sy tsy fantatra. Io fiovana io, miaraka amin'ny fiovana hafa amin'ny fanavaozana ny fanavaozana, dia nahatonga ny famafana ireo toerana voalazan'ny "antitra" voalohany sy ny votoatin'izy ireo, ka ny "folder" vaovao ihany no tsy misy ".
Indrisy anefa fa ho an'ireo izay tsy manana backups na lahatsoratry ny aloky ny famerenana azy, ny hany fomba hanamboarana ity olana ity dia ny fampiasana rindrambaiko fanoratana an-tsoratra toy ny Recuva.
Mpifanaraka amin'ny solosaina tsy mifankatia no nidona HP PCs
Taorian'ny fametrahana ny ampahany farany amin'ny fanavaozana dia nahita mpampiasa solosaina HP nahazo ny fakana BSOD izay nampiseho ny hadisoana WDF_VIOLATION. Ireo trangan-javatra ireo dia nahatonga ny mpamily tsy mendrika ho an'ny HP (version 11.0.3.1) izay natolotra tamin'ny alàlan'ny Windows Update.
Araka ny iray lahatsoratra fanohanana, Namantatra ny mpamily sahirana i Microsoft ary nanala izany tamin'ny Windows Update. Ho an'ireo izay nanamboatra ilay mpamily, saingy tsy naverina naverina intsony, dia namoaka vaovao indray i Microsoft izay nanala ilay mpamily tsy mety.
"Niara-niasa tamin'i HP i Microsoft, dia namantatra ny mpamily HP iray izay fantatra amin'ny tsy fahafaha-mifandray amin'ny fitaovana HP sasany ao amin'ny Windows 10 version 1803 sy 1809. Tamin'ny Oktober 11, nesorin'i Microsoft ny mpamily tamin'ny Windows Update mba hampihenana ny isan'ireo fitaovana voakasika. Ankoatra izany, navoaka ny KB 4468304 izahay mba hanaisotra ilay mpamily tsy azo ampiasaina amin'ny fitaovana naverina naverina. HP dia miasa am-pahibemaso amin'ity olana ity. "
Ho an'ireo izay efa nanamboatra ilay mpamily, naverina indray, ary mahita ireo fianjerana ankehitriny, dia mila araho ny torolalana eto.
Voakapoka taorian'ny fametrahana fanavaozana
Nandritra ny fotoana fohy dia nanosika ny mpamily fiara Intel ho an'ny mpampiasa azy i Microsoft noho ny tsy fahombiazany izay nahatonga ny audio tsy ampiasaina intsony ao amin'ny Windows 10 1803 sy 1809. Raha nisy fiantraikany tamin'ity mpamily ity ny mpampiasa, dia tsy nahare feo intsony izy ireo tao amin'ny Windows 10 ary ny rafitra fantsona dia hampiseho hafatra milaza ny "Tsy misy Audio Output Device install install".
Efa nanakana ny fizaran'io mpamily io i Microsoft, saingy raha nisy fiantraikany ianao dia afaka manamboatra ny feoo ianao manaraka ny torolàlana eto.
Asehoy ny olana mamirapiratra aorian'ny fametrahana fanavaozana
Rehefa avy nametraka ny Windows 10 October 2018 Update, dia misy mpampiasa sasany mitaraina fa ny famirapiratany dia mamerina amin'ny isa ambany kely isaky ny manamboatra ny ordinaterany. Tsy maintsy mamerina manova azy ireo amin'io fivoriana io izy ireo avy eo.
Mety ho azo atao ny manamboatra izany amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny mpamatsy graphics efa niova, fa ny ankamaroan'ny olona izay voakasika dia milaza fa tsy manampy izany.
Indrisy anefa, amin'izao fotoana izao dia tsy misy famahana efa fantatra momba io olana io.
Ny Microsoft Edge & UWP apps dia tsy afaka mifandray amin'ny Internet
Miaraka amin'ny famoahana ny Windows 10 1809, ny Microsoft Edge sy ny Microsoft Store apps dia mila TCP / IPv6 ho alefa na tsy afaka mifandray amin'ny Internet.
Raha te hamadika IPv6 ao amin'ny sehatra TCP ianao dia tanteraho ireto dingana ireto:
tsindrio eo amin'ny Network & Internet
Tsindrio Hanova safidy adapter
Tsindrio eo ankavanana amin'ny fitaovana ampiasainao hifandray amin'ny Internet ary mifidiana Properties.
Ataovy azo antoka fa misy marika eo akaikin'ny Internet Protocol Version 6 (TCP / IPv6)
Tsindrio ny OK bokotra hivoaka ny trano.
Andramo ho hita raha afaka mifandray amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny Edge sy ny apps ianao.
Raha mbola tsy afaka mifandray ianao, dia mety ho voatery manao fanovana ao amin'ny rejisitra ihany koa. Open regedit.exe ary mandehana mankany amin'ny "HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpip6Parameters"Key.
Indray mandeha, mitadiava anarana iray DisabledComponents ary aoka ho azo antoka fa voatendry 0.
Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny mpamily Intel Audio
Farany, raha miezaka mametraka ny vaovao farany ianao ary mahita fampahafantarana izay milaza hoe "Inona no tokony ho sainao" ary avy eo dia maneho mpamily mitondra ny lohateny hoe "Intel Audio Display (intcdaud.sys), KB4465877" dia tsy ho afaka hametraka ny farany ianao Windows 10 upgrade.
Hitanao ity hafatra ity satria nahitan'i Microsoft ny tsy fitoviana amin'ny mpamily Intel izay mety ho olana amin'ny famandrihana 10 2018 XNUMX Oktobra. Raha hitanao ity hafatra ity, Microsoft firenena tokony hotsaroana ianao indray ary miandrasa mandra-piverin'ny mpamily efa misy alohan'ny hanavaoanao ny milina indray.
check check keyboard windows 10 Microsoft Windows Patch (informatika) Patch Tuesday Ordinatera mandamina ny windows mandresy 10 1809 Windows 10 windows vaovao farany
Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Odnoklassniki Pocket WhatsApp telegrama Viber Share tamin'ny alalan'ny mailaka Print
Ny nomeraon'ny nomeraon'ny finday dia mianjera fa manatsara ny teknolojiam-bola
Top 11 Best Video editing software for windows in 2017 (Free and Pay)
Zavatra tokony hatao Rehefa avy najoro Ubuntu 18.04
Inona no atao hoe Sedsvc.exe, Sedlauncher.exe Filaha sy Ordinatera REMPL ao amin'ny Windows 10?
Tsy afaka nahita ity singa ity, Tsy hita intsony ny fahadisoana ao amin'ny Windows 10
Ahoana no hamahana ny fehezan-dalàna 0xC004C003 ao amin'ny Windows 10
Enga anie 31, 2016
Linux Upd Updates Miakatra: Skype, Stacer, QupZilla, Divay
Ahoana no hametrahana ny YOURLs amin'ny Ubuntu 14.04
Samsung manamafy ny Galaxy S10 5G Specifications: Exynos Modem 5100 ho an'ny 5G voalohany amin'ny fitaovana ao Korea
Ahoana ny fijerena ny haavon'ny Internet ao amin'ny Ubuntu amin'ny fampiasana baiko
Ahoana ny fomba ahazoana ny MacBook toy ny horonantsary amin'ny laptop Windows
15 New Window 10 Features mila mila fampiasa
Ny fikirakirana PUBG update #25 dia miaina eo amin'ny loham-pitsapana: Bizon SMG, Canted Sight, Vikendi Moonlight weather and more
Windows.UI.Xaml.Markup.XamlParseException diso ny fampiharana UWP amin'ny Windows 10
Ahoana no manampy ny fametrahana ny efijery CAB ao amin'ny menus Context of Windows 10
Intel dia manindry ny CPUs Celeron & Pentium
Ahoana ny fomba fanavaozana ny Ubuntu 19.04 amin'ny 18.10, Right Now
Ahoana ny fomba hamoronana Kaontina ao amin'ny Word Word sy ny fanontana azy
Ampidino ny GNU Nano Text Editor ao amin'ny Ubuntu Linux
Ampidiro ny mpilalao Music Player 1.8.0 ao amin'ny Ubuntu Linux
Sary tsy hita ao amin'ny Windows Search Box ao amin'ny Windows 10
Inona ny Windows 10 LTSC na Long Term Servicing Channel?
CyberLink dia manangana PowerDVD 19 ho an'ny UltraHD Blu-ray sy 8K Videos
Ny OWC dia manangana Aura Pro X2 NVMe SSD Upgrade For Macs
Intel no mahazo ny Omnitek: FPGA Video Acceleration and Inferencing
GIGABYTE hanombohana Aorus ATC800 CPU Cooler: Toeram-pisakafoanana mendrika
Sony Teases Next-Gen PlayStation: Custom AMD Chip miaraka amin'ny Zen 2 CPU & Navi GPU, SSD Too
MX Tools revized - Miaramila Serivanin'ny penguins
WhatsApp dia hamela anao tsy hiraharaha ireo olona tsy misy fanakanana na fialana vondrona
Ny mpampiasa WhatsApp dia mametraka safidy hanakanana hafatra miverimberina
Google dia mamela ny mpampiasa hampiditra ny findainy Android amin'ny fanalahidy fiarovana ara-batana
Fomba tsara indrindra hampiasana ordinatera
5 Lehibe lehibe ho an'ny iPhone XS, XS Max, XR
Spotify vs Apple Music - Nihena ny vidiny, ny kalitao ary ny fiainana manokana
Ahoana ny fampidirana ny iOS sy Android beta software
'App 10 paoma lalao Google iPhone Linux Microsoft nbsp One ' Phone Server finday avo lenta Ubuntu vaovao farany Users Windows Windows 10
Miverina amin'ny bokotra ambony